Libia: Hiverina sa Tsia? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Aogositra 2017 5:17 GMT
Herinandro maromaro lasa izay, nahitana hetsika isankarazany teo amin'ny blaogy Libiana. Io no fanadinana ‘faran'ny taona’ ho an'ny sekoly Libiana ka nanokana lahatsoratra maro ho an'io i Khadijateri.
Amin'ny lafiny iray, lohateny nafampàna iray no nampidirin'i Nura teo amin'ny Ly-Hub. Blaogy fiseraseran'ireo mpanao blaogy ao Libia ny Ly-Hub na koa ‘ireo izay liana amin'i Libia’. Amin'ny ankapobeny, tena mpanambatra vaovao tsotra io. Navoitran'i Nura (eto ambany) ilay olana, izay tena lafovidy tokoa ho an'ny ‘mughtarib‘ tsirairay na ny mpila ravinahitra.
“Naniry ny hanontany anareo rehetra aho – ry rahalahy sy anabavy Libiana malala – raha toa manana faniriana hiverina tsindraindray any Libia koa ianareo na tsia? Koa satria mbola tsy nipetraka tao Libia aho, matetika aho no tena mahatsapa ho tapaka fifandraisana amin'io firenena io ary matetika no tsapako ny filàna miverina any hanao fitsidihana iray mba hanavao indray io fifandraisana io, izay tena efa marefo tokoa.”
Fanontanian'i Nura noraisin'i Anglo Libyan izay nandefa mikasika azy io tamin'ny alalan'ny fanontaniana hoe “Hiverina sa tsia?“. Sahala amin'ny manohintohina ireo Libiana monina any ivelany io.
Azonao hamarinina eto ny resak'izy ireo mikasika azy io ; Anglo Libyan manontany tena hoe “ny olana goavana dia ity, mba handray azy ireo ho tongasoa ao ve i Libia?” ho eken'ireo vahoaka Libiana ve ry zareo sa tsy hiraharaha azy ireo ny vahoaka Libiana sady hitondra azy ireo ho sahala amin'ireo mpifindramonina niverina? maro ireo fanontaniana saingy tsy misy valiny.“
Rose Buds, Libiana iray any Texas, manohana ny hoe rehefa mandeha any ivelany isika Libiana, adinontsika ireo zavatra ratsy ao Libia ary ireo zavatra tsara ihany no tsaroantsika. Lazainy fa tsy maintsy mila mpitsidika iray isika mba hampatsiahy ireny endri-javatra rehetra izay mahalasa adala antsika mikasika an'i Libia ireny [misimisy kokoa].
Ny OnLibya no mpanao blaogy iray tena mahaliana izay vao avy narahiko vao haingana. Natokany manontolo ny blaoginy Survey ho amin'ireo raharaha misy ankehitriny ao anaty fiarahamonintsika ny blaoginy, toy ny fanambadiana, fahasalamana ary ny tsikera.
Amin'ny ankapobeny, manamafy ny heviny izy avy eo mitanisa ireo fanontaniany. Fomba tsara izany, ary betsaka no azonao ianarana avy amin'ny ankamaroan'ireo lahatsorany mivantambatana’.
Noho izany, afaka marihintsika indray fa toa samy manana ny zotra arahany ireo blaogy Libiana, izay antony tsy mahatonga azy ireny tsy hahamonamonaina. Mandehana ka trandraho izy ireny.